काठमाडाैं | बैशाख २०, २०७९
तपाईंको इलेक्ट्रिक स्कुटर गुडिरहेकै समयमा तातिएको छ ? सावधान हुनुस् ।
भारतमा गुडिरहेको इलेक्ट्रिक स्कूटीमा आगो लागेको छ ।
तमिलनाडुको कृष्णागिरीमा यो घटना भएको हो ।
त्यहाँ सतीश कुमार नामका एक युवकले इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाइरहेका थिए ।
यात्राकै क्रममा अचानक स्कूटीमा आगो बल्न थाल्यो ।
स्कूटी गुडिरहँदा नै सिटमुनी बाट आगो शुरू भएको सतीशले बताएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले बताएका छन् ।
त्यसपछि उनले तत्कालै स्कूटीबाट निस्किए ।
उनले इलेक्ट्रिक स्कूटरको अघिल्लो साल किनेका थिए ।
यो घटना प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । भारतमा पछिल्लो समय इलेक्ट्रिक स्कुटरमा आगो लागेको घटना निकै आइरहेका छन् ।
स्कुटर निर्माता कम्पनीहरूले किन यस्तो भयो भन्ने बारे अनुसन्धान गरिरहेको जनाएका छन् ।
भाइरल घोषणापत्रवाला ठकुराठीलाई बालुवाटारबाट पनि फोन– कसरी फुर्‍यो यस्तो 'भिजन' ?
ढुंगाबाट कागज बनाउन खोज्दै रुस
रुसले ढुंगाबाट कागज बनाउने प्रविधि विकास गरिरहेको छ । यस्तो कागजमा सेलुलोजको साटो चुनढुंगा र विषरहित पोलिमर उपयोग गरिन्छ । अनि यस्तो कागजको मूल्य परम्परागत कागजको भन्दा सस्तो हुन्छ । रुससँग चुनढुंग...
पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको अध्यक्षमा कांग्रेस, उपाध्यक्षमा माओवादी विजयी
शुरू भयो भरतपुर महानगरमा रोकिएको मतगणना
विराटनगर महानगर : कसको कति मत ?
अवरुद्ध मतगणना शुरू गर्न भरतपुर महानगरमा सर्वदलीय बैठक
धादिङको खनियाँबास गाउँपालिकामा गठबन्धनका उम्मेदवारहरू निर्वाचित
भागेश्वर गाउँपालिकामा कांग्रेसले जित्दा घोषणापत्र भाइरल भएका खडकबहादुरले कति पाए मत ?
क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकामा एमालेको अग्रता, कांग्रेसले पछ्याउँदै
फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा माओवादीका लिम्बु विजयी
तराई-मधेशमा बज्यो सीके राउतको हर्न, ७ पालिकामा अग्रता, २० मा प्रतिस्पर्धा
जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका अध्यक्षमा माओवादीकी पहिलो महिला उम्मेदवार निर्वाचित
महासचिवको गृहजिल्लामा एमालेको लज्जास्पद प्रदर्शन, ९ पालिकामध्ये एकमा मात्रै अघि
निर्वाचनमा योजनाबद्ध धाँधली भएको भन्दै एमालेले गर्‍यो पुनः मतदानको माग
प्रभु साहको क्षेत्रमा माओवादीको अग्रता